ILoft yomlingo enePool eMlanjeni - I-Airbnb
ILoft yomlingo enePool eMlanjeni
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguNahuel
Le Loft ikwindawo entle yaseVilla del Rio kwisiXeko saseGeneral Roca.
Inommandla ogqunyiweyo we-70 m2, kuzo sifumana ikhitshi enkulu enebha, igumbi lokuhlambela elipheleleyo kunye neshawa yaseFinland, igumbi lokuhlala elinebhedi yesofa kunye neTV kunye netafile eyahlukileyo yabantu abayi-12.
Kumgangatho ophezulu, igumbi elibanzi elinebhedi enezihlalo ezibini kunye neefestile ezi-4 ububanzi ezijonge uMlambo.
Idama elikhulu elinolwandle olumanzi lwe-10 mx 4.5 m kunye ne-1.85 ubunzulu
Ngaphandle kwale Loft inethafa ukubona ukuphuma kwelanga okungama-25 m2. Isitovu esixhonyiweyo ukonwabela nabanye abantu abangaphezu kweshumi abahleli kwigumbi lokuhlala laloo ndawo ikhethekileyo. Kunye negalari ebanzi enesiqingatha esigqunywe ngebhari kunye negumbi lokuhlala laseRatan.
Ummandla we-Villa del Rio unokufikelela ngokukhawuleza kwi-Rio Negro kunye neehambo ezimbini zeenqanawa ... Ummandla unokhuseleko lweeyure ezingama-24 kunye neendawo ezisetyenziswayo eziqhelekileyo apho unokuyonwabela kusasa ngemilingo nangemva kwemini kunye nosapho lwakho.
Ichweba apho unokubukela iintaka kunye nezilwanyana zendalo zale ndawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Nahuel
Militante de las causas justas
Umthetho okhoyo ngoku kwi-Covid uya kuba sisinyanzelo. 19. Kwaye iiNdwendwe kufuneka zithobele imigaqo yezempilo esekwe ngumasipala, iphondo kunye nesizwe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- General Roca
General Roca Department, Río Negro